Dhalinyaro lagu xir xiray Degmada Beled-Xaawo – idalenews.com
Wararka aan ka heleyno Degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in Ciidamada Ammaanka xir-xireen Dhalinyaro Tiradooda lagu sheegay 6-Lix oo ay Ciidamada uga shakiyeen inay Xiriir la leeyihiin Kooxda Alshabaab ee Dagaalka kula jira Maamulka Gedo.
Cabbey John Taliyaha Ammaanka Degmadda Beled-Xaawo oo la hadlaayay Warbaahinta ayaa sheegay in Dhalinyarada la soo qab-qabtay ay Ciidamadda Ammaanka uga shakiyeen inay xiriir la leeyihiin Kooxda Alshabaab, waxa uuna intaa ku daray Taliyaha in Ciidamadda Ammaanka ay sii wadi-doonaan Howlgalada lagu ciribtiraayo waxa uu ugu yeeray Haraadiga Alshabaab.
Taliyaha ayaa sheegay inay Sirdoonkooda ka heleen warar sheegaya in xubno ka tirsan al-Shabaab ay qaab dhuumaaleysi ah ku soo galeen Gudaha Degmada Beled-Xaawo si ay u geystaan falal ammaan darro ah, ayuu yiri Taliyaha.
Si kastaba ha ahee Taliyaha Ammaanka ayaa sheegay in Ciidamadad Ammaanka ay Lixda Dhalinyaro ku xireen xabsiga degmada, waxa uuna Tilmaamay in Dhalintaasi la soo taagi doono Maxkamad qofkii ay ku cadaatana ay xukun ku fulin-doonaan.
Qarax ka dhacay Xaafadda Islii ee Magaaladda Nairobi